iHome အကြော်အိုးများ - iHome ► Shopping Time
မူလသို > လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ>မီးဖိုချောင်သုံး>ချက်ပြုတ်အိုးအစုံ
ကုန်ပစ္စည်း 17 ခု ရှိပါသည်
Electric Pot 1. Hot Pot လုပ်လို့ ရခြင်း။ 2. ကြက်ဥ ပြုတ်လို့ ရခြင်း။ 3. ခေါက်ဆွဲ ပြုတ်လို့ ရခြင်း။ 4. ရေနွေး ကြိုလို့ ရခြင်း။
SUPOR ( F15A24 )
(1) ပေါင်း ၊ ချက် ၊ ကြော် စသည့်အားလုံးအသုံးပြုနိုင်ခြင်း (2) ကောင်းမွန်သောထုတ်လုပ်မှုများကြောင့် လူကြိုက်များခြင်း (3) ဒီဇိုင်းလှပပြီး အသုံးပြုရတာ လွယ်ကူခြင်း (4) အခြားပေါင်းအိုးများထက် ကြာရှည်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
Super Wide အမှတ်တံဆိပ် Multi-Function Cooker (SW-802)
Korea Multi-Function Pan
Mitsutarbo အမှတ်တံဆိပ် Korea Multifunction Pan ချက်ပြုတ်ရာတွင် မီးအားစားသက်သာ၍ လျှင်မြန်ခြင်း ဟင်းလျာများကို ဆီဖြင့်ကြော်ခြင်း၊ဆီပြန်ဟင်းချက်ခြင်း၊အစိမ်းကြော်ခြင်း အသားပေါင်းခြင်း၊အသားကင်ခြင်း၊ဟင်းချိုရည်ချက်ခြင်း၊အသား ငါး - အသီးအရွက် ချက်ပြုတ်ခြင်း၊အခြောက်ေ လှာ်ခြင်း၊ငါးပိ ငါးခြောက်ဖုတ်ခြင်း စ သည်ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Yierle အမှတ်တံဆိပ် စတီးဒယ်အိုး (BCW-36C2)
KANGSU အမှတ်တံဆိပ် ကြွေပေါင်းအိုး 1. အသား ငါး ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ တိုက်ရိုက် မထိတွေ့ ပဲ ချက်ပြုတ်နိင်အောင် ကြွေသား နဲ့ အိုးကို ပြုလုပ်ထားခြင်း။ 2. အသားငါးပေါင်းခြင်း ၊ ဆန်ပြုတ်ပြုတ်ခြင်း တွေအတွက် အထူးသင့်လျှော်ခြင်း။ 3. အသား ၊ ငါးတွေ ကို အချိန်ကြာကြာ ပေါင်းထားမိလို့ လည်းရေမခမ်းစေခြင်း။ 4. ဟင်းချက်တဲ့ အခါမှာလဲ ဝေမကျ ၊ အိုး မကပ် ၊ မီးအားလဲ မစားစေခြင်း။
Square Fry Pan ဟင်းချက်ရာမှာဖြစ်ဖြစ်၊ အသားငါး၊ အသီးအရွက်တွေကြော်ရာမှာဖြစ်ဖြစ်
Super Cook အမြန်ချက်၊ဆီမစားလျှပ်စစ်အိုး
Korea Multifunction Pan
► အလူမီနီယမ် သတ္ထုကိုယ်ထည်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း၊ ► အိုးအတွင်း ဆီမကပ်ရန် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော ကြွေရည်ဖြင့် သုတ်လိမ်းထားခြင်း၊ ► ကင်ဆာရောဂါကိုဖြစ်စေသော ဓာတုဆေးများလုံးဝမပါ ပါ ► အကြမ်းဒဏ်နှင့် အပူဒဏ်ခံနိုင်ရန်အလွှာ ၃လွှာရှိသော မှန်ဖြင့် အဖုံးပြုလုပ် ထားခြင်း ► ချက်ပြုတ်ရာတွင် မီးအားစားသက်သာ၍ လျှင်မြန်ခြင်း ► ဟင်းလျာများကို...
Hot Pot အိမ်မှာပဲ ကိုယ့်ဘာသာ သာသာယာယာ hot pot လုပ်စားလို့ရတဲ့ အိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။